Ithiyori kunye nolwakhiwo lweemoto zasekhaya kunye nezamashishini -Ikaro
yokuqalisa >> Motors
Sivula icandelo elitsha, ukuze sithethe ngalo iinjini.
Siza kufuna kwaye sichaze basebenza njani kwaye ungazakha njani iinjini ezishushu nezifudumeleyo.
Ukusuka Iinjini ezothusayo apho ndinomdla kakhulu kude kube Iimoto zebhetri ezilula kunye nesikrufu. Iingcebiso zamkelekile.
Iijenereyitha zoMbane: Imbali yoMbane oNxibelelayo
Imbali yenzululwazi kunye nethekhinoloji yinguqu eqhubekayo yezinto ezifunyenweyo kunye nophuculo. Umzekelo omkhulu woku ngoomatshini be-electrostatic okanye iijenereyitha. Kwesi sincoko sifutshane siza kubona imbali yombane ngokulandelelana kwayo izinto ezifunyenweyo ezinxulumene ne-electrostatics kunye nokusetyenziswa kwazo kobugcisa, ngakumbi ngohlobo lweejenereyitha, ekubeni kwafunyaniswa ukuba ukuhlikihla intlaka kwatsala izinto ezithile kwaye kwakungaziwa kakuhle ukuba kutheni kwanezona jenereyitha zale mihla ezisele ziphelelwe lixesha ezisetyenziselwa ukufundisa kunye nemidlalo yefiziksi yokuzonwabisa.
Ijenereyitha ye-electrostatic iyakwazi ukuvelisa amandla ombane aphezulu kodwa ngemisinga emincinci kakhulu.. Basekwe phezu ukukhuhlana, ukusuka amandla mechanical ukuba kufuneka sibe negalelo ukuphumeza ukukhuhlana kwizinto ezimbini, inxalenye iguqulwa ibe bubushushu kwaye enye ibe amandla electrostatic.
Los Iimoto ezingama-775 ziimoto ezisebenza ngqo ngoku isetyenziswe kwiiprojekthi ezininzi kwaye ndicinga ukuba zaziwa kakhulu ebantwini.
Xa sithetha ngezi ntlobo zeenjini, i-775 ibhekisa kubungakanani bemoto esemgangathweni. Ngale ndlela sinokufumana i-775 eyenziwe ziintlobo ezahlukeneyo, ezinemilinganiselo yokusebenza eyahlukeneyo kunye namandla ahlukeneyo, kunye neseti enye yeebheringi okanye ezimbini. Kodwa into ehlonitshwa ngumntu wonke bubungakanani benjini.
Injini yeion yesiphekepheke esiye eCERES
Inqwelo moya yeli Dawn isandula ukufika eCeres kwaye ijikeleza kuyo yenze njalo ngenjini entsha.
Ku malunga injini ye-ion eziza kuba namandla kwisizukulwana esilandelayo senqwelomoya. Amandla ombane asetyenziselwa ukwenza amasuntswana ahlawulweyo kumafutha, ihlala iXenon igesi, kwaye ikhawulezise ukuya kwizantya eziphezulu kakhulu. Isantya sokubaleka kweerokethi eziqhelekileyo sinqunyelwe kumandla eekhemikhali agcinwe kwimixokelelwane yeemolekyuli zepetroli, ethintela umda ukuya kwi-5 km / s. Nangona kunjalo ii-injini ze-ion zinjalo kulinganiselwe kuphela ngamandla ombane afumanekayo enqanaweni isithuba, ukufumana isantya sokubaleka esihamba kuluhlu phakathi kwe-15 km / s ukuya kwi-35 km / s.
Mva nje ndibhale kancinci kodwa ewe UPatelo ukhupha injini entsha, oku kufuneka kuphononongwe. Ndibona iindaba kwi Amalangatye Unyaka omnye wokusebenza, iiyure ezingama-1 ukwakha lo mmangaliso.
Kwabo bangamaziyo, uPatelo (José Manuel Hermo Barreriro) ngu Umkhandi wenqanawa oneminyaka engama-75 ubudala, uthathe umhlalaphantsi, eye yaziwa njengezinjini ezenzayo.
Injini yePatelo W-32
Izilinda ezingama-32 zokugqibela ku-W, injini eyayiza kukwazi ukuhambisa amandla amaninzi ukuba yayingengomoya omncinci oxineneyo. Kuyandichukumisa, ukuba ufumane oomatshini abagqibeleleyo kwaye abanazintlungu. Jonga iingqekembe zemali azibeka kwimotor. Njengoko uPatelo esitsho, inqanaba lokungcangcazela limisela ubomi boomatshini.
Imoto yotshintsho esebenza ngamacandelo ombane
Umboniso weemoto zombane ophuhliswe ziiC-Motive Technologies ezisebenzisa iindawo zombane endaweni yamandla ombane ukuvelisa intshukumo. Ifoto nguDan Ludois
Injini yedesktop, isebenzisa ifayile ye- umgaqo omtsha wokuguqula umbane ube ngamandla ajikelezayo, iyaphuhliswa kwiilebhu zeC-Motive Technologies, isiqalo esithengisa itekhnoloji evela kwiKholeji yobunjineli ye IYunivesithi yaseWisconsin-Madison
Umsunguli wenkampani uDan Ludois, uprofesa wobunjineli bombane kunye nekhompyutha Kumazwana e-UW:
Siye sabonisa umxholo wenqwelo-mafutha entsha esebenzisa amasimi ombane endaweni yeemagnethi ukuguqula umbane ube ngamandla ajikelezayo.
Le ngcamango ayikho ntsha ngokupheleleyo. UBenjamin Franklin (Jonga uFranklin's Electrostatic Motor) kunye nezinye izazinzulu Bachaze kwaye bakha iimoto ngokusekwe kumandla ombane kodwa zonke njengezinto zaselabhoratri ezinomdla, akukho nanye esebenzayo nesebenzisekayo.
Uyenza njani i-motor eyenziweyo yombane
Ukuba wakhe eyakho Umvelisi kaVan der Graaff kwaye awazi ukuba wenze ntoni ngayo, ungasebenzisa umbane ongashukumiyo owenzayo njengomthombo wamandla wale moto ye-electrostatic.
Kuyinyani ukuba ayikho ngaphezu kokufuna ukwazi, kodwa ingaba yiprojekthi yesayensi efanelekileyo, i-generator + motor electrostatic. Nokuba wenze Electroscope ukujoyina ipakethi ye iimvavanyo zombane :)
Iimoto zombane ziphucula ulawulo kunye nokhuseleko
Phantse kunyaka ophelileyo, sabhekisa kwiThala leeNcwadi loMbane le-Scheneider. Kule meko sizivalele ngaphakathi ukuze ... Qhubeka nokufunda
Uyenza njani iMoto yeMagnetic yeMoto
Enkosi ngegalelo elivela I-tao yefiziksiNdiyayazi Injini yeMpembelelo yeMagnetic.
Imoto isekwe kwipropathi yezixhobo ze-ferromagnetic ezifunyenwe ngu-Pierre Curie, oko kukuthi emva kobushushu obuthile izixhobo ziphulukana nemazibuthe yazo kwaye azisekho kumazibuthe.
Injini yelanga yeMendocino
El Injini yeMendocino Yiyo yombane eyenza umazibuthe usebenze kwaye isebenzise amandla elanga. Ubuhle benjini bayibukele ibaleka ngelixa idada emoyeni. Kubonakala ngathi ngumlingo.
Yenziwe ngamacandelo amabini ahlukeneyo, inkqubo yemagnethi eyenza i-levitate kunye nenxalenye ye-electromechanical yemoto eyenza ukuba ijike.Imoto inobuso obune (icandelo lesikwere) ejikeleze i-axis, eyenza i-rotor. Ibloko le-rotor lineeseti ezimbini zamakhoyili kunye neseli yelanga encanyathiselwe kwicala ngalinye. Shaft ithe tye kwaye inomazibuthe esiphelweni ngasinye.